Dhageyso: Guddoonka Goleyaasha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa diraya baaq wadajir ah – XOGMAAL.COM
Dhageyso: Guddoonka Goleyaasha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa diraya baaq wadajir ah
Sidoo kale,Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda ayaa ugu Garaadada, Madax dhaqameedka, Culumaa’udiinka iyo Waxgaradka degaannadaas in ay u guntadaan nabadda, joojiyaanna dhiigga beelaha walaalaha ah ee daadanaya.
Cabdi Xaashi C/llaahi Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ayaa baaq nabadeed u diray Beelaha ku dagaalamaya nawaaxiga deegaanada Dhumay, Dharkayn geenyo ee Gobolka Sool.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa tilmaamay in nasiib daro ay tahay in xilligan la daadiyo dhiigga dad shacab ah, wuxuu muujiyay in uu xanuunka la wadaagayo ehelada dadkooda ay waxyeelada ka soo gaartay Colaadaasi
Guddoomiye Cabdi Xaashi
Dhinaca kale Maxamed Mursal sheikh Cabdiraxmaan Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa dhalinyarada,isimada, iyo waxgaradka kasoo jeeda beelaha dagaalamaya ugu baaqay in ay kaalin mug leh ka qaataan joojinta dagaalkaasi.
Mursal ayaa tilmaamay in loo baahanyahay ka shaqeynta nabad ku soo dabaalida deegaanada dagaalada ay ka socdaan, kuwaasi oo sabab u noqday in qoysas badan ay barakaceyn.
Guddoomiye Maxamed Mursal
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaaraha ayaa goor sii horeysay ugu baaqay, Madax dhaqameedka, Culumaa’udiinka iyo Waxgaradka degaannadaas in ay u guntadaan nabadda, iyo joojinta dhiigga beelaha walaalaha ah ee daadanaya.
Akhriso:- Dowladda oo gacanta ku dhigay Xubin muhiim u ah Al shabaab
Warbixin:- Aas-aaska Qaramada Midoobay waxaa laga joogaa 73-sano